Unyaka omusha ezweni lethu beqala ukujabula akunjalo kudala, eminyakeni engaphansi kwengu-100 edlule. Ngaphambi ukuthi kwaba Christmas: ngomculo, carols izingelosi ku noboya-izihlahla. Kodwa into eyodwa awuzange ushintshe. Futhi uNcibijane, futhi uKhisimusi abantwana beze sinye siyafanana imfihlakalo isivakashi - Santa Claus. Akekho owake ubona, kodwa izingane ekuseni ngaphansi kwesihlahla icele izipho ezimangalisayo. Ukwakhiwa efanayo kanye nozakwabo Santa Claus emazweni ahlukahlukene.
Kuphi lapho wavela khona Santa Claus?
Isimanga siwukuthi lesi uhlamvu akuhlangene ne zenkolo, iholide Motifs yobuKristu. Lena - samuntu abandayo ebusika, unkulunkulu abandayo lobuqaba futhi frost. Okuphansi onezinwele ezimhlophe ixhegu ijazi ngesikhumba semvu, okuyinto sidilize ngenduku futhi ufa lokhuni kwanda emoyeni ebusika. Ngokusho ezinganekwaneni, uma izinsuku lwasebusika lapho imini imfushane kwaba nesithwathwa ikakhulukazi, isivuno kufanele kube omuhle. Ngakho-ke, i-Santa Claus ku windowsills embukisweni nezitsha zokudla - kutey isiko kanye pancake. It - izitsha, wakhonza Imiphefumulo, ebusika ubulokhu uhlotshaniswa nge lwamaSlav ezweni elizayo. isixhumanisi okunjalo ne emikhubeni yobuqaba - akukhona okungavamile ukuba likhithike. Akubalulekile kunjalo, liyini igama Santa Claus emazweni ahlukahlukene. Cishe yonke indawo umlingisi livela ubuqaba hoary.
Khona Santa Claus kungekho izipho kwakungelamuntu oyinika. Kwakuyisikhathi unkulunkulu enemikhuba esabekayo, kodwa fair. It Frost - aka Santa Claus - e yezinganekwane kwezipho ezinhle futhi ajezise izinhlamvu okubi. Ekuqaleni, lokhu motif besuka Folk Motifs izincwadi, abalobi alalelwa izinhlamvu ezimibalabala. Ngekhulu le-19 kwaba kakade uhlobo owaziwa.
Ngesikhathi esifanayo ezweni ubelokhu wajaha imizamo zamukele amasiko Western Christmas bese udala Analogue ezinhle wizadi ebusika. Nesithakazelo, njengoba ibizwa Santa Claus emazweni ahlukahlukene, izinto ezahlukene ongazikhetha babebhekwa njengabantu. Kunikezelwe Saint Nicholas, Umkhulu uNicholas, futhi nakakhulu ajwayelekile Slavic indlebe Frost. Kodwa yimpumelelo kakhulu indima umthakathi ezinhle ebusika wayelingana ncamashí uFather Christmas. Wayethanda kokubili ngabantwana nangabantu abadala. Ngesikhathi esifanayo kwakukhona ngendlela yendabuko kanye ixhegu ekhanyayo, noboya-ngaphakathi elingenamikhono, isigqoko, kanye amabhuzu. Njengoba izintambo ziyobe ziphethwe ajwayeleke Santa Claus ephethe abasebenzi imilingo eside. Kamuva e wizadi uvele engumngane - Umzukulu Snow Maiden.
Futhi kuthiwani kwamanye amazwe?
uhlamvu enjalo elikhona izinganekwane nalamanye emave. Akukhona njalo ubudala, ngezinye izikhathi ngisho neze abantu. Isidalwa wasenganekwaneni, unkulunkulu, umthakathi ezinhle. Ngohlobo Lomuntu Okufanele Ube izidalwa ezinjalo okuyinqaba kakhulu. Kungenzeka ngesikhathi Santas umhlangano ezivela emazweni ahlukahlukene akakwazanga ngisho sazana. Yebo nasemasikweni iyahlukahluka kakhulu. Somewhere nabathakathi izipho izingane ezinhle, kwenye futhi ajezise abangalaleli. Kukhona namazwe lapho edilini kuziwa izingane izivakashi ezimbili - okuhle nokubi. Eyokuqala wezipho, okwesibili, uma ingane sebeyimidlwembe kwaholela abantu abayizigidi, kuyangethusa kuye noma ujezisa. Kuze kube yimanje, ubusika ngokhahlo umoya yayivame ezibekelelwe isiswebhu real kakhulu.
Manje ake sixoxe ngendlela ukubiza Santa Claus emazweni ehlukene zezwe nokuthi kubukeka.
I ajwayelekile Santa Claus
Chubby umuntu omdala kanye emfushane, Fluffy ngesilevu esimhlophe. elingenamikhono Red, isigqoko elibomvu nge noboya ngombala. Santa Claus - okungukuthi njengoba ibizwa Santa Claus emazweni ahlukahlukene - kusuka eBrithani kuya Melika, e-Australia saya e-Canada. Efika zonke Christmas isihlibhi magic edonswa reindeer, futhi kuletha izipho izingane. I sibonelo yale ndoda ezinhle wayeneminyaka Saint Nicholas. Phela, Santa - kuba "ngcwele", futhi Klaus - uhlobo igama 'Nicholas'. Lapho izwe ajwayelekile Santa Claus engazange abe khona, nguye owakhuphula Disemba 5 izingane namaswidi nezipho ezincane wabafihla endaweni Sock oshiywe eziko noma ngaphansi komqamelo. AmaDashi, abahlonipha Saint Nicholas nabathandwayo holidi, abazinikezele kuye, baletha leli siko ukuze Melika. Yena wazinza ngokushesha izingane eziningi ngosuku olwandulela uKhisimusi elinde bili ongaqondakali Santa Claus, ngubani isiqiniseko ukuletha zonke izipho.
Indlela Santa Claus libizwa emazweni ahlukahlukene, ngezinye izikhathi ukuzwa abaseRussia kuzwakala pretty funny. Ngokwesibonelo, eFinland, isidalwa imilingo, ukufeza isifiso ezithandwayo zezingoma izingane, ngokuthi Joulupukki. Ehunyushiwe, lokhu kusho futhi ngaphezulu noma ngaphansi - "christmas imbuzi". Nokho, eFinland, le nkulumo ayinakho ithoni zihlasela noma edidayo. Iqiniso lokuthi ku nembuzi Christmas ngaphilisa umuntu utshani - kanye nokubona off ubusika ne Injengesithusamagwababa ka Maslenitsa eRussia. Futhi lokho okushiwo yile isinyathelo sinye siyafanana - elalenziwa amaqaba, okumele ngonyaka eduze aqiniseke ukuthi uthola isivuno esihle. Kodwa eFinland njengoba unkulunkulu wenzalo imele kozloobraznyh sona sifana le fauns lasendulo isiGreki satyrs. Lapha kukhona isiko uya unike Joulupukki isidlaliso ongaziwa ezinjalo. Ngezinye izikhathi ibizwa ngisho ukuboniswa ngezimpondo encane ekhanda lakhe. Ngakho, ukukhuluma ngendlela igama Santa Claus emazweni ahlukahlukene, awukwazi smile ukucabanga ukuthi ngezinye izikhathi kuba magician okuhle, hhayi nje kuphela, kodwa artiodactyl kancane.
Ngasekuqaleni Finnish emaphandleni guys egqoke uboya ngaphakathi ukuphuma amajazi futhi egqoka imbuzi imaski - okwamanje efanayo futhi isiko isiko lwesiSlavic Christmas. Kodwa e Russia, buso ngokuvamile carols ukucula nje futhi ufisa abanikazi impilo kanye nomnotho. EFinland, ezifana lapha begqoke umoya wobuqaba guys ngisho wabanika izipho abalalelayo, abalaleli wayethukile futhi wathembisa Spank.
Ukukhuluma ngendlela ukubiza Santa Claus emazweni ahlukahlukene emhlabeni wonke, ingasaphathwa-Italy. Lapho, ngokungafani kaKhisimusi izinhlamvu eziningi, nezipho zezingane inika wesifazane - Fairy Befana. Cha, uYihlo Christmas khona kakhulu. Igama lakhe Babbo Natale. Futhi sengathi uyathakatha Fairy Befana kuletha izingane amaswidi akuyona kakhulu Christmas, futhi ngo-January 6 lokhu - usuku celebration of the Epiphany oNgcwele. Labo ziziphatha kahle, uyazikhandla ke ngaphansi ushokoledi umcamelo kanye uswidi, futhi tricksy ukugxusha amasokisi amalahle izingcezu. Fairy Befana ubukeka pretty funny - efana uyathakatha wangempela. ekhaleni Imilutha Yezithombe, namazinyo esigwegwile , futhi izingubo ezimnyama. Ngokusho yetinsita inganekwane Befana yake i uyathakatha okubi. Kodwa ngemva kokufunda mayelana nokuzalwa kukaJesu, wanquma ukuba ayiyeke le black magic. Wahlangana izazi kanye nokunye okufana nalokho ndawonye nabo aye eBhethelehema. Kodwa abanayo abampofu ninabo Befanu. Kunalokho, lapho ethola isabelo sokukhuluma zululeka emhlabeni futhi banikeze izingane izipho esilalelayo ngokujezisa varmints. Ngakho kukhona izinketho eziningi kanjani ukubiza Santa Claus emazweni ahlukahlukene ukhona. Kuphela Italy - i uyathakatha embi wanquma ukuba okuhle.
Ezweni ngalinye - amasiko abo. Ekuqaleni kungase kuzwakale kuyindida, okungajwayelekile, futhi ngisho funny - kodwa nje othile kubonakala kuwubuwula Santa Claus Isithwathwa Ntombazane. EJapane, isibonelo, kukhona amaningi njengoba ezimbili izinhlamvu elihlobene ne-New Year. Ukukhuluma ngendlela Santa Claus libizwa emazweni ahlukahlukene, kunzima ukwazi ukuthi uzodlala nje ukuthi bathini mayelana Japan. Kukhona okukakhenoni Segatsu-san, futhi kuyisidala Oji-san. Lena - umphumela ukuxuba amasiko kazwelonke nethonya isiko mass.
umoya ababili kaNcibijane
Segatsu-san - uphawu Yonyaka okusha lasendulo. Ehamba ngesonto ukuya ekhaya, ekubongeni iholide Japanese futhi ubanika inhlanhla elihle nokuba nengcebo. Zonke izinsuku eziyisikhombisa nizokuvala kubhekwe, kulokhu etafuleni inikeza kaKhisimusi izibiliboco, futhi izingane abagqoké izingubo zakhe zokugqoka ezingcono. Ukuze Segatsu-san kuyinto ethize bamboo ayindilinga ehlotshiswe amagatsha zikaphayini. Ngabo, ayenakho ukungena endlini. Mhlawumbe etshela mayelana nendlela Santa Claus libizwa emazweni ahlukahlukene, kufanele ukhulume Segatsu-san. Phela, nguye - umoya yendabuko we-Japanese New Year. Nokho, siveza akekho unika.
Oji-san - umphumela ezisobala nomthelela wamazwe asentshonalanga. Kuyinto efanayo kakhulu Santa Claus, futhi bonakalise izingane. Enibaziyo bendabuko isiko Japanese Oji-san has a encane, kodwa izingane zithande it - eqinisweni, ubapha izipho, hhayi kuphela siyakuhalalisela kanye nezifiso sikufisela inhlanhla.
Nesselbeck Castle (Orlovka, Kaliningrad esifundeni): ehhotela, restaurant, Museum "isigxobo ephakathi isijeziso"
Umlando Odessa kusukela endulo kuze kube namuhla: usuku, imicimbi, abantu abadumile kusukela Odessa
I-Tea wuMkhiqizo Wezendalo Ezweni Lamazwe.